WARBIXIN: Itoobiya ma waxay isu diyaarinaysaa dagaal ka dhan ah Somaliland? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
WARBIXIN: Itoobiya ma waxay isu diyaarinaysaa dagaal ka dhan ah Somaliland?
January 6, 2022 Xuseen 34
Wargeyska The National Interest ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in Dowladda Itoobiya, ay isku diyaarinayso duulaan ay ku qabsato magaalado xeebeeda Saylac, ee deegaanada Somaliland.
Warbixintan uu wargeysku ciwaan uga dhigay “Itoobiya ma waxay isu diyaarinaysaa dagaal ka dhan ah Somaliland?”, ayuu ku xusay in Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed Ali uu go’aamiyay in dib loo soo nooleeyo, sheegashadii xabashida ee lahaanshaha magaalada Saylac.
The National Interest, ayaa sheegay in Xukuumadda Addis Ababa ay culeys badan kala kulantay, dagaalka ay kula jirto jabhadda TPLF, ayna go’aamisay in loo dhaqaaqo jiho cusub oo qalalaase ah, si loo jiheeyo dadka Itoobiya, loona soo galiyo dagaalka iyo loolanka quwadaha is diidan caalamka.
Saylac, Waa magaalo taariikhi ah oo ku taalla gobalka Awdal ee gobalada-Waqooyi ee Soomaaliya (Somaliland), waxay ku dhowdahay xuduudka dalka Jabuuti oo ay u jirto ilaa 120-KM, halka magaalada Boorame ay u jirto qiyaastii 240-KM, waxaana 270-KM ay u jirtaa magaalada Berbera. magaaladan ayaa waxaa ay leedahay taariikh dheer, iyadoo la sheego inay saldhigyo u aheyd boqortooyooyin waa weyn.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali ayaa sanadkii 2018, ku dhawaaqay inay Itoobiya yeelaneyso ciidammo badeed, kuwaas oo noqonaya kuwa ugu xoogga badan qaarada Africa.
Halkaan Riix si aad u Akhriso warbixinta The National Interest
Itoobiya oo ah dalka labaad ee Africa ugu dadka badan, marka laga soot ago Nigeria, ayaan laheyn wax bad ah, tan iyo markii ay ka go’day Eratrea, waxaana 95% badeecadaha dalkeeda imaanaya ay kala degtaa Dekedaha dalka Jabuuti.
Dowladda Itoobiya ayaa gadatay saami dhan 19% Dekedda Berbera, oo dayactir iyo balaarin ay ku sameynayso Shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta.
oo mashaki baa kaga jira waa horayeeba khabsan lahada ee waxaa hakiyay dagaalkii tigrayda
Dalka dhan ayaa nalagu haystaa sxb. Hal meel ka hadlay.
Seylac Soomaali baa leh, weligeedna Itoobiya ma yeelan, mana yeelan Doonto!
Laakiin Waxaan qiyaasayaa in aay war bixita wargeysku tahay, qorshe uu dagaalka Itoobiya fashiliyey oo aay reer Galbeedku gadaal ka riixayeen!
Tusaale, waxaan ognahay in aay Itoobiya ku dhawaaqday dagaalka ka hor, dhisidda Ciidamada Badda oo noqon doono kuwa Africa ugu xoogga badan! Kuwaa oo aay qalabeyntooda ballan qaaday, dowlada Islaamka neceb ee Faransiiska!
Marka, warka war geyska waa “wixii uu uurka qabay af baa xado”!
Laakiin Iidoor amuuba ku qanacsan yahay in aay Itoobiya qabsato, iyagoo ka cararaya Soomaaliya!!!!
Cali Daacuun says:
Kkkk sheeko khayaalka nagalatag adeer.
Saylac somaliland ba leh
Warkana waa Fakenews
Ma Saylac baa nalagu haystaa bay yidhaahdeen?!
Waxa aan u malaynayaa in “wakhtigan casriga ah” aysan cid waaqiciga la socotaa soo xigan oo waxbana ka soo qaadin warbaahin Maraykan ama reer Galbeed ah. Midda kale, haddiiba ay Itoobiya ama waddan kale uu soo hulado taako ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliya (min Lawyacaddo illaa Liboye-Somalia) waxaa u dhaartay masuuliyaddaas oo lagala xisaabtamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, mudane Maxammed Cabdullahi Maxammed (Farmaajo).
Intaa waxaa dheer, waxaa muuqata in reer Galbeedku ay weli wadaan dagaalkii ka dhanka ahaa Mr. abiy, oo ay kalhore caasimaddiisa khalkhal ba’an geliyeen kaddib markii ay isku dayeen in ay cabsi galiyaan oo ay borobogaan ku afganbiyaan.
Gunaanadkii, warbaahin Maraykan oo waa hore laga ilbaxay war hannooga dhigina.
Waxaan u maleyn Somali maanta waa kala daadsan tahay wixii la doonana waa laga yeeli karaa, Allah uunbaa u hiiliya.
BARO CADAWAGA DADKA IYO DALKA SOOMAALILAND?…
1)intay walaalahood soomaali/weyne ka carayaan
bey (Aflibaax Galeen)? BULSHIT…
Waana gumaysigii shanta gobol u kala qaybiyay Soomaalida- waxaana u madax ah oo arintaa kow ka ah dawaladaha Ethiopia iyo Israel. Ujeedada ka ..BULSHIT
muuse Bixii, siilaanyo, faysal Cali dhurwaa (waa doqon gaamurey)?
What is the biggest bullshit that people in somaliland believe?
Somalia: United We Stand
Wargeyska maqaalka uu qorey dib ugu noqo.. Itoobiya meesha ay rabto ma ahan Zeylac ee waa Berbera, Hargeysa iyo Burco..
Dadka Soomaalida hadda wey bislaadeen waxayna diyaar u yihiin in ay nabad ku bedeshaan dhul..
Waa qasab aan marnaba laga gorgortamikarin in Berbera, Hargeysa iyo Burco ku biiraan Federaalka Itoobiya si Soomaaliya inteeda kale nabad u hesho.
Waxaa intaas dheer in iidoor iyo xabashi isku isir yihiin oo ay yihiin dad is ogol iskana jecel Soomaalida.
Dadka warkan ku gacanseyraya sardho weyn ayay kadhex khuurinayaan oo waaqiciga dhabta ah ee Geeska Afrika hadda ka jira ayay ka dhegala’yihiin.
Akhristaha Yasin ah ayaa runta asiibay.
Soomaaliya waxaa Abiy hoosta uga saxiixay Farmaajo, Abiyna imberatooriyaddii Amxaarada oo soo labakacleysay ayaa ku adeeganaysa, taas oo mandiqadda Soomaaliyeed udhaarsan oo qaddiyad ahaanna ka aaminsan maxmiyad ay iyadu leedahay.
Siyaasaddu sideedaba waxay mataaneysan yihiin oo iskuna liilansan yihiin dhaqaalaha, sidaas ajligeedna, waddamo badan ayay quwadaha caalamku si dadban ugu qabsadaan iyaga oo dhaqaalaha iyo “heshiisyo” ganacsi ugusoo hoos dhuumanaya. Horta Jabuuti qaabkaas dadban ayay Itoobiya iyo Galbeedku gacanta ugu dhigeen oo way ku daysay.
Waxaa xigtay in Berberana SNM-ta qiil gacansi lagaga surbacday oo ay iyaduna qaabkaas Itoobiya ugu gacangashay. Puntland, Jubbaland, iyo Koonfurtana Al-Shabaab ayaa Itoobiya kaga gudban oo loosoomari kari waayay e waahore ayaa ciidamo Itoobiyaan ah lasoodhoobi lahaa oo dekadahoodana lagu lawareegi lahaa.
Soomaaliya waxaa Abiy ka xaraashay Farmaajo iyo Biixi, iyaga oo uu midiba kan kale ku boqonnaggoo isleeyahay. Abiy ballanta uu Farmaajo u qaaday waxay ahayd in uu Hargeysa usoo gacangeliyo, Amxaaradana waxaa u qorsheysan in marka uu Farmaajo soonoqdo ay Soomaaliya si dabdan oo “heshiisyo caalami ah” loo maldahday kulawareegto.
Waxaana dabada kasoo riixaya oo taakuleynaya Fransiiska, Ingiriiska, Israa’iil, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Masar, iyo Republican-ka Mareykanka. Siciid Danina maadaama uu Imaaraatiyiinta jeebka uugujiro, isna waa homboboro libaaxyadaas dalka kusoo wadda.
Waana sababta aan marar badan ugu nuuxnuuxsado in dalkani rajadiisu kujirto jiil ugub ah oo qawsaarradan casrigoodii idlaaday ka nadiifsan oo kana hufan. Laganayaabee in ay Saylac noqoto tii Soomaalida markale dib umideyn lahayd – Allaahu Aclam.
PuntlNpdot artical kan soooo dhigeen may fahmin Article ku basically wuxuuu la ha hadlayaaa USA in ay somaliland aqooonsato waxaaana qoray ni ka u dooda somaliland ama qareeenka somalilNd Senior advicer Michael rubin
Adiga hadii lagu iraahdo amaba maqasho Hargeisa Chinese ku qabsnayaa.. waad usacaba tumi lahayd..
Markaa waxaad qorto cidiba ma akhrido Oo qof waxaad tahay cuqdada xanuun maskaxiyan ahi udheeryahay..allah haku cafiyo!
Hadalkaagu isaga ayaa toos isuburiyay oo marna waxaad ku andacootay in “aysan cidi akhriyin waxa aan qoro”, haddana aad sixun uga halcatay qoraalkaygan kore.
In aad sidan xun uga halcatay ayaa caddeyn buuxda u ah in aad akhrisay!
Midda kale, haddii uu caqligaagu shaqeynayo, waxaad oran lahayd “qoraalkaaga anigu ma akhriyo”; “cidiba ma akhriso” waa hadal aad sixun iskugu ceebeysay waayo akhyaarta adiga kaa sharafta badan oo meeshan wax ka akhrisata qareen uma tihid oo uma hadli kartid.
Alla cawaannimadu xumaa!
Horta, arrinka wargeysku sheegay waa mid dhiillo xambaarsan oo aan la dhayalsan karin; waa xog loo dusiyey oo gogolxaar ah. Marka waxa kale oo dhan meel la iska dhigo, waxaa arrinkaas xoojinaya oo markhaati u ah ciidanka badda ee Itoobiya dhisanayso. Itoobiya ciidan bad uma dhisanayn meel aan ahayn xeebaha Soomaaliyeed, ujeeddaduna ma aha inay baryootanto amase si heshiis ah deked ku kiraysato.
Qorshahan waa kii 30ka sano loogu diiday Somalia inay dowlad noqoto oo lugaheeda ku istaagto, si loogu nugleeyo in Itoobiya leqdo. Nasiibdarrose, waxaa arrinka usii fududeeyey waa ninka aan caqliga iyo aragtida dheer lahayn ee ku jira Villa Somalia oo heshiisyada uu Abiy la galay aan cidna ogeyn waxa ay ku saabsan yihiin. Wax kasta wuxuu uga tanaasulay inuu kursiga ku fadhiyo oo gaalo iyo Abiy ku taageeraan; waa sababta uu weli isugu dhejinayo kursiga. Marar badan ayaan hore u sheegay in ninkani qandaraas kusoo qaatay inuu Somalia dib u celiyo oo burburiyo.
Itoobiya maanta waa maalinkii ay igu tabardarnayd oo ugu daciifsanayd, dagaalkii Tigrayna ma dhammaan mana dhammaan doono mustaqbalka dhow. Haddii Abiy maanta damco inuu Seylac xoog ku qabsado, taas waa naftihalligid (suicide) waana tii Somaliweyn mideyn lahayd. Waxaa hubaa xabbadda Seylac ka bilaabata inay isku mar ka bilaaban doonto min Diri Dhaba ilaa Mooyaale. Tan kale, Seylac sida aan filayo waa degaan Ciise iyo Samaroon, taasoo toos u saamaynaysa Jibuuti oo aan fadhi u oolli doonin sababtoo ah waxba kama dambeyn doonto Seylac.
Waxaan hadda kahor dhegaystay hadal uu sheegay sheekha aqoonyahanka iyo indheergaradka ah ee reer Jibuuti, Sh. C/Raxmaan Bashiir. Wuxuu sheegay in Itoobiya ay heshiis la galeen Carabtu, gaar ahaan Sacuudiga. Wuxuu sheegay in laga soo xigtay lataliyihii hore ee boqorka Sacuudiga — Anwar Cishq in ay Itoobiya heshiis la galeen si ay gacanta ugu dhigaan ‘badda’ gaaska dabiiciga ah ee hoosjiifta gobolka Soomaalida Itoobiya, sidaa awgeedna, ay taageeraan Itoobiya inay qabsato xeebaha Somalia.
Haddii Itoobiya kusoo duusho Seylac, Soomaali — Alle ka sokoow– cid shisheeye ah oo ay ku tashanayso oo aan Turkiga ahayn majirto. Xitaa Masar waxaa ku filan xoogaa tanaasulaad ah oo looga sameeyo biyaha webiga Niil. Ma laga yaabaa in duullanka dib loogu dhigo ilaa 2023 si loo hubiyo in Ordogan doorashada soo socota ee Turkiga ku guuleysan doono?
Ugu dambeyn, tallaabada ugu horreeysa ee Soomaali la gudboon waa in meesha laga saaro ninka fadhiidka ah ee Somalia la haray shantii sano ee lasoo dhaafay, lana doorto hoggaamiye karti leh oo Soomaali mideyn kara. Muuse Biixi waan hubaa inuu dagaallami doono haddii uusan mu’aamaradda qayb ka ahayn.
Ma dhiman dhashii iyo ruuxiyaddii imaam Axmed-gurey iyo saldanadii Cadal.
Dadku kala fun fiican.
Beryihii Farmaajo Ku cusbaa tlada dalka fashilmay we Somaliya ayaa kuwo u jibeysan ayaa Ku hadaaqi jiray Somaliland Farmaajo ayaa qabsanaya,isagoo adeegsanaya ciidamo xabashi iyo Eritrea ah!!!
Sidaa xishood darrida,soomaalinimo xumada,qab xumada ,damiir xumida,diin xumida,shisheeye kalkaalnimada,waddaniyad xumida ah ayay u hadaaqayeen!!!!
Aan usoo noqdo mawduuc.
Horta soomaalidu ha fahmaan inay iyagu hayaan furaha burburka iyo nabadda Itoobiya.
Aan si toos ah u abbaaro qarankayga Somaliland siiba haddii uu wax khatar ah dareemo waa diyaar qorshihii lagaga hortegi lahaa qorshe kasta oo arinkaa la xidhiidha.
Sida la wada ogsoonyahay Farmaajo wuxu dhawaan qorsheeyay inu soomaalida u adeegsado,kuna qabsado ciidamada laba dal oo mid Itoobiya tahay ta kalena Eritrea, kana bilaabo Muqdisho,waase fashilmay qorshahaas kadib dagaaladii ka qarxay isla Itoobiya.
Jamhuuriyadda Somaliland markay dareentay damacaas iyana waxay bilowday inay dalkeeda keento MASAR oo cadaawadda ka dhex jirta Itoobiya la ogyahay maadaama Itoobiya dhayalsanayso heshiiskii Somaliland ay wada galeen ee ahaa inaan dalna taageerin cadowga kan kale,lana yeesho difaac mushtarak ah.
Itoobiya oo ganacsi weyn,isu socod bulsho,iskaashi dhinacyo badan ah kala dhexeeyo Somaliland way ka qancisay Somaliland arrinkaa,waxayna caddeeyeen in arimuhu sidoodii yihiin,Laguna dhaqmo.
Ugu dambeyn soomaali ha ogaato si kasta oo ay u kala irdhowday inaanay ka fadhiyayn duulaan ajnebi kusoo qaado dhul soomaaliyeed meeshuu doono ha ahaadee,arrintaasu hadday timaadona keenayso inay u midoobaan iska celinta cadowgaas,ilaahayna u waayayn garabyo ay kaashadaan,kuna daafacdaan dhulkooda.
Maqaalkan oo uu qoray Yahuudka Michael Rubin oo u ololeeya in Somaliland aqoonsi hesho, halkii uu xoogga saari lahaa oo cambaarayn lahaa damaca Itoobiya ayuu wuxuu soo jeedinayaa in Maraykanku u aqoonsado dal madaxbannaan Somaliland si loo baajiyo damaca Abiy Ahmed! Somaliland sharciga caalamiga ah –weli waa qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Somalia, sidaa awgeed, uma baahna aqoonsi si dhulkeedu uga dabadgalo duullaan iyo ixtilaal. Maraykan haddii uu daacad yahay waa inuu Abiy Ahmed u sheegaa inuu dib u leqo riyada iyo damaca Abbysinia (Amxaara iyo Tigray) ee xeebaha Soomaaliyeed ee ilaa qarnigii 16aad.
Innaga Soomaali ahaan wixii ina dhexyaal waa arrin qoys oo hoose laakiin haddii dhulkeenna qayb ka mid ah la qabasado waxaa nagu dhici doonta sheekadii libaaxa iyo saddexda dibi. Haddii Seylac la qabsado, kama dambeyn doonaan Jibuuti, Berbera, Boosaaso, Garacad, Hobyo, Xamar, Marka, Baraawe, iyo Kismaayo.
Horta aragti dheeridii Awoowayaashay ayay ahayd in soomaalidii labada dawladood ahaa,midkastaana gaarkeeda u xorowday la mideyo,saddexda kalena la raadiyaa,si loo helo WAX AY UGU YEEDHEEN “SOOMAALI WEYN”.
Waxay arkayeen in soomaali la mdeeyo dawlad ahaan,dal ahaan,caqli ahaan,cudud ahaan,cadow ahaan.
Arrinkii waa socon waayay,waana la khasaariyay,maantana soomaali wax isugu jilan,isu naxaysaa,isu qalbi fayoobi ma jirto,ee nin kastow xiniinyahaa,caqligaa kaasho,kuna jir digtooni joogto ah oo aad kaga jirto cadow soomaali.
Dadka maanka gaaban ee u haysta inay Somalia oo siday u haystaan ah dal xor ah,kaga badbaadayaan khataraha aan ka hadlayno waa dad aan waaqica la socon.
Somalia waa xero Afrikaan,waxana kusoo duulay carab fikir ahaan,oo usoo waariday gumaadka shacabka soomaaliyeed,iyadoo diin lagu dhuumanaayo,midna waa mid gaalo caddaan iyo madow ah oo aanba qarsoonayn.
Meel waaba gacan gashay ee ka fiyow in lagusoo siqo ayaa socota.
Kii gargaar u baahnaa cid gargaar ka sugaysa caqli ahaan waa yaab.
Waa laynugu soo duulayaa uun arrin maaha ee aan garanno halka awoowayaashii hore ee Soomaali gaadheen oo la ogyahay inay HARAR xataa soomaali ka talin jirtay waagii Axmed Guray.
1977-78 soomaali waxay Ku sigatay inay qabsato gabi ahaanba Itoobiyada laysku xuuxinayo ee saqajaaamiin bilaa damiir ahi wad wadaan.
Soomaali inay iyadu qoorta dhigato,isna dullayso maahane cidna ma damci karto.
LUGNA BAQE LUGNA DIRIR MAS BAA LAGA HAYAA.
Cadowga Somaliland melahaa naxliga ha la wareegaan,waxase yaab ah inay isba weydiin soomaalida la qabsan waayay markay birta iska asleen,iska dumiyeen nidaamkii rajiimka ahaa,silica,saxariirka,ciidan la’aanta,dhaqaale la’aanta,cunto la’aanta,shaqo la’aanta ee magaalooyin dunsan dhaxleen maanta oo ay ka roon yihiin 30 sano siday u dhici kartaa arrinkaasi?
Dunida shuruuc baa kala hagta,ciddiise is dulleysa,ka raalli noqota faro gelin,waa dulloobaan.
SOMALILAND SOMALIA AYAA KA NUGUL HADDIIBA LAYSU DARDAAR WARINAAYO.
Khaayinka hadda taladeeda haya ayAana Ku deeqay dekedo dalkaas ah,mase noqonayso mid u hirgelaysa inu sii joogitaanka kursiga ku bedesho dekedo soomaaliyeed si xukunka loogusii hayo.
Eritrea oo ahayd Itoobiya ayay awoodi weyday inay CASAB ka xoogaan macdallaahi soomaali waxay taqaanoba dagaal yahay.
Haddii soomaalidu qadiyad soomaalinimo u dagaalamayso waxay suurto gal ka dhigi karaan inay bedelaan qaab dhismeeeka geeska.
WAXNA WAA POSSIBLE AMA MACQUUL AH, WAXNA WAA PROBABLE- WAXA JIRRA JAANIS UU KU DHICI KARO IYO JAANISYO AANU KU DHICI KARIN.
ARRINTANI WAA PROBABLE, WAXA JIRA JAANIS AY KU DHICI KARTO LAAKIIN MA AHA JAANIS WEYN AMA LA SHEEGI KARO WAAYO DHEH:
* ITOOBIYA XUDUUDEEDU ALREADY WAXAY KA DIWAAN GASHAN TAHAY UNka IYO MAPKA ADDUUNKA.
ISBEDEL KASTA OO LAGU SAMEEYO WAA MID SI FUDUD LOO WADA ARKAYO CIDA MAPKA BADALAYSA.
BADDA SOOMAALIDU MARNABA KUMAY JIRIN DISPUTED AREA SIDA OGADEN.
WAXA ITOOBIYA UGU DHAW INAY BAD HESHO IYADOO QOOMIYADA CANFARTA KU DIRTA QOOMIYADA SOOMAALIDA/CIISAHA JABUUTI, HADHAWNA CANFARTA OO BADDA JABUUTI QAYB WATA AY TAAGEERTO, DABADEEDNA CIISAHA LAGA ADKAADO OO CANFARTU BADH BADDA JABUUTI AH INTAY GOOSTAAN ITOOBIYA LA GALAAN.
AMA IN AY ERITREA DIB UGU QANCIYAAN MIDNIMO CUSUB.
2. ITOOBIYA HADAY SOOMAALIDA SIIBA SOMALILAND CADOW KA DHIGATO HADANA DHULKII IYO BADII XOOG KU QABSAN WAYDO, TANI WAXAY KU SII ADKAYNAYSA BAD LA’AANTII HAYSAY WAAYO JABUUTINA WAY KA TAGAYSAA, XITAA ERITREANKU WAXAY DAREEMI DOONAAN KHATARTA DAMACA ITOOBIYA IYO CAALWAANIMADEEDA OO WAXAY KA TABAABULSHAYSANAYAAN INAANAY IYAGA ISKU SOO QAADIN MARKA JABUUTI, SOMALILAND IYO SOMAALIYABA KA SOO XIDHMAAN.
3. ITOOBIYA WAXAY CASHAR KA QAADANAYSAA SIDA SHARCIGU U QABTAY KENYA ARRINTII BADDA.
HADDA LAMA JOOGO XILIGII WADAN UU WADAN KALE ISKAGA DUULI JIRAY.
DARIIQA KELI AH EE SIDAN LOO SAMAYN KARAA WAA HADII DISPUTED LAND AMA DHUL XUDUUDEEDU LAGU MURANSAN YAHAY UU JIRRO SIDA KII AY XOOGA INAGAGA QAATEEN OGADEN.
CAALA KULI XAAL, ARRINTANI WAA PROBABLE LAAKIIN PROBABILITYGA INAY DHACDO XITAA QORMO SAYNIS LAGUMA QORI KARO – WAA WAX AAD UYAR SIDA 0.00000000000000000000000000000000000001
Michel Rubin wuxu daba socdaa damacii Afwerki,Abiy,& adeegohooda Farmaajo ee fashilmay,kuna aadanaa in Farmaajo si qasab ah loo hoos keeno Somalia oo Puntlandna Ku jirto,mana ahayn arrin Somaliland khuseysay,ee waxay Ku ekayd Somalia,welina waa socdaa oo waxa u dhiman Farmaajo oo kursiga kusoo noqda si xeeladaysan.
Marnaba Somalia ma u suurtoobayso inay Somaliland qabsadaan,awood xagooda ah walaa cudud shisheeye.
Reer ayaa caan Ku ah in soomaalida cadow lagusoo hogaamiyo,laguna faano iyadoo kursi xiisihii arrinku yahay.
Farmaajo ceebtii ma ahayn inu damacaas beeshiisa mar kale sameeyo,balse waa la yaqaan meesha uu la damacsanaa,welina la damacsanyahay.
2006 inay soo noqotaa wax cusub maaha.
Dalna Somalia xoog ugusoo duuli maayo ee si siyaasi ah ayuu u qabsan iyagoo meesha saaraya mid ay Ku adeegtaan,kana saxeexdaan waxay rabaan sida maantaba jirta.
HA KU XIIQIN SOMALILAND WAA XOR AAMIN AHE.
Cabdi nuur says:
Jabuuti ayaa ugu dhow meel Itoobiya damaacido dhawr asbaabood dartood
1-Iyagoo ka faaiideysanaya kala duwanaanshaha bulsheed ee dalkaas oo CANFARTA iyo soomaalida iska horkeenaya,hadhowtona Canfarta Itoobiya usoo gurmadaan,maadaama oo xadka keliya kala qaybiyo.
2-Jabuuti oo boqolaal bilyan oo maalgelin dekeddheeda ah la gashay Itoobiya.
Lkn labadaas qorsheba ma soconayaan runtii asbaabo badan aawadood,waxase loo baahanyahay tabaabusho hore.
Soomaali iyana waa isu gurman markaas.
Aniga waxay ila tahay. .. Sooomali weyn, waa siil aad u weyn wax loo baahan yahay mmaba ah waana arin mar hore laga baxay doonidiisana lagu jabay mar hore, Ethiopia damac way yeelan kartaa sida dawlad waliba damac u leedahay , laakiin haday damaceeda ku darto xoog iyo is balaadhin dagaal bilawdo dan ayaa ugu jirta Somaliland u socon mayso xuduud aduunku calaamadiyay ayay soo dhaaftay.. Looma baahna Zoomalia oo iyadaba Ugaandha gacanta ku hayso waxbana aan tari karin
Soomali weyn, waa Siiil aad weyn . wax faaiido ah uu leeyahay ma jirto. fikirkaa waxaa ku hadaaqa dadka waalan.
Farmaaajo waxa uu kula heshiiyay Axmad abii oromo & Afwarqii hawshaa in si xeeladaysan lagu galo way socon wayday. Abii Axmad ayaa farmaajo ku yidhi anigaa Somaliland ku gaynaya tuurta kugu qaadaya Hargaysa kaa dejinaya markaa ayuu farmaajo yiro ilee xoolo ilaahay e, waayahay. waxaan ugu jawaabnay adiga iyo farmaajo midna nooma iman karo 2 keleb ayaad tihiin.. markaas ciyaalooow aad soomaliweyn , zoomali , Zoomali ka hadlaysaan..Yaaaab
Waan doonaynaa in Ethiopia soo duusho hadaan Somaliland nahay. aduunku markaa waxa uu is waydiinayaa yaa lagu duulay? yaaase Soo duulay . markaa mid xamar iska jooga oo tacbaan ah Amisoom Ugaandha iyo Burindi madaxa ka garaacdo ayaa hiil kuugu imanaya waaa sheeko waaaali ah.
Saylac oo keliyaa?
Haddii nala aqoonsanayo Saylac waa yar tahaye illaa Lawyaddo ayaanu siinaynaa Itoobiya. Deedna deriska ayaanu inle’eg ka soo goosanaynaa. Yaa idiin baahan gudhuuyahay.
Nabar la filayey lagama naxo.
Magalada embakasi ee kenya ayaa somali looga saxiixay in ay ka tanasulaan hankii somaliweyn oo ay somali u xalaaleysey kenya iyo itobia dhulkii somaliyeed ee ay haysteen.
Saxiixaasu waxuu ku beeray kenya iyo otobia damac cusub oo weyn oo ay dhul cusub iyo bad cusub uga hantinayaan somali. Lalama yaabi karo labadaan dowladood waayo hanti ninkii lahaa meel ku dayacay nin kasta ayaa hunguri ka galin.
Somali waxaa la haray muqdisho iyo hargeysa.
70sano ka hor ayey qoomiyada falastin soo dhaweysteen qomiyada yuhuuda ayagoo markaas dan u arkayey in imaanshaha yuhuuda ay uga faaiideysan karaan loolanka dhexdooda yaala oo midba midka kale ayuu islahaa waad uga gacan sareyn kadhaa is-xijinta yuhuuda iyo reer galbeedka soo galbinayey. Waxii ka dambeeyey’na waa lawada ogyahay.
Itobia ma haweysan kadho somali isku duuban. Mana hunguriyeen kadho dhulkii usoo haray somali, oo aan ahayn somali oo dhulkoodii hadiyad u siisa, ayago is ximinaya sidii ay awalba sameeyeen reer falastin.
Somali haday ku fakarayso in uu damaca xabashidu yahay wax aan suurta gal ahayn hadee layaab maleh oo kali kuma aha maangaabnimada. Waxaa uga horeeyey falastiin iyo kurdish iyo Baluuschi’ga oo aan maanta dhul iyo dagaan gacan ug jirin oo la-haystayaal ah.
Bal u fiirso Ciidanka Ethiopia halkay haystaan maanta, Gedo, Baydhaba, Hiiraan, galgaduud.. kuwii ay haysteen ayaa ku leh ayaa ku leh haday Somaliland weeraan waan u gurmanaynaa oo may iska xoreeyaan iyagu.. Zoomalia caqligu futada ayuu kaga jiraa.
Barre waa xabash afsoomali nagu bartay.
Xabashidu waxay dadkoodii kusoo daabuleen dalkeenii oo wakaas midka la baxay barre oo manta ka talinaya aayihii somaaliyeed.
Barre dambi ma leh ee waxaa dambiga leh anaga iyo “boy-man”. Kuwaas oo aanu hogaan ka dhiganay. Ragii talin jirey dhamaade oo BOY-MAN ayaa badalay.
Nama cabsiiyo nacabku says:
Itoobiya waxa loo saxiixay Bosaso iyo Baraawe not Zaylac.
Zaylac waa Somaliland,Somaliya iyo Farmaajo kama taliyo.
Waad jeclaan lahaydeen sidaad siriqda u geliseen XAMAR iyo Somalia inaad Somaliland la jeclaataan sidaas laakiin sorry yaad na moodeen?
Ma garan karo wax aan ku kala doorto Iidoor iyo Xabashi oo aanan ka ahayn in uu Iidoor Af Soomaali ku hadlo!
Marka aay noqoto labadoodu kee baa Soomaali neceb, waxaan qabaa Iidoorka ayaa neceb oo weliba nacayb fog neceb!
Marka, dhulku Ilaah baa leh, Ciddii uu doono ayuu dhaxalsiiyaa. Ee haddii aay noqoto in aay Seylac Xabashi qabsato oo aaysan jirin Soomaali mideeysan oo ka difaacan karto, ha ku noolaadeena iyaguba Xabashi af Soomaali ku hadasho way ka buuxdaaye! Kkk
Inta Daarood Soomaali Ku dhex jiro ma xabashi iyo cadow baa ka maqan?
Waaba Jabarti oo asal ahaan nagasoo galay Amxaarada.
Ani garab kaagama baahni ee adigu Ku Hagar bax waxaad ii qaban lahayd.
Quwadaha ugu weyn ayaan na haweysan Karin adna Itoobiya oo aan saaxiibo,deris nahay ayaad ka hadli.
China ayaa ka yaabay qabka dalka yar ee Somaliland ee tidhi NO waxay rabeen,una sheegay inaan waxba loo yeedhin,meeshuna ahayn Zoomalia land of Animal.